RivalIQ: Asọmpi Social Media na SEO nchịkọta | Martech Zone
NdoliIQ bụ a cross-ọwa analysis ngwá ọrụ na-enye asọmpi analysis na search maqbx chekwebe na-elekọta mmadụ media, alerts, isiokwu na ogo data, na influencer nnyocha.
NdoliIQ na-enye nyocha ọchụchọ na nyocha mgbasa ozi ọha na eze maka ndị na-ere ahịa dijitalụ:
Nchịkọta Twitter - data Twitter ichoro - ya na ntinye aka ya na ihe nile Tweet na odida obodo gi. Na mgbakwunye, ị ga-enweta nsuso nsuso maka mpaghara gị dum.
Facebook Analytics - sochie post ọ bụla - yana ọkwa mpi ahụ. Hụ onye na-enwekarị Mmasị, Nkwupụta, na Mbakasị. Na mgbakwunye, banye na Facebook Insights data.
Nchịkọta Instagram - Sochie nsonye Insta gị. Hụ ihe posts ga - eme aka na ihe Instagram ahịa usoro asọmpi gị na-anwa.
Nchịkọta Google+ - sochie post ọ bụla, + 1, kwuo, ma kesaa iji hụ na ị maara ihe ndị asọmpi gị na Google+.
Nchịkọta Youtube - Echiche, nkọwa, ndị debanyere aha na ndị ọzọ. Usoro Youtube gị niile, na ndị asọmpi gị.
Nchịkọta SEO - nyocha ihe omimi nyocha nke nwere oke data na njikọ dị na mpụga na isiokwu isiokwu.
Nchịkọta SEM - iji data SEM asọmpi, soro nke ndị asọmpi gị na-akpọsa ma hụ ego ha.
Tags: nchịkọta facebookGoogle Analyticsnchịkọta instagramRivaliqsem nchịkọtanchịkọta seonchịkọta twitternyocha youtube
Jul 13, 2015 na 8: 49 AM
Ngwa na-akpali mmasị, ga-anwale ya n'ọdịnihu dị nso. Ọ dị ukwuu na ịkekọrịta ozi ahụ. M na-eche ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịrụ ọrụ niile anyị nwere ike ịpụ na ahrefs.com?
Jul 15, 2015 na 4:48 PM
Enyochabeghị m atụmatụ ahụ nke ọma.